Talyaaniga oo garaacay Sweden si wareega xiga ee tartanka Euro uu isaga xaadiriyo | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Talyaaniga oo garaacay Sweden si wareega xiga ee tartanka Euro uu isaga xaadiriyo
Talyaaniga oo garaacay Sweden si wareega xiga ee tartanka Euro uu isaga xaadiriyo
Posted by: radio himilo June 17, 2016
Xulalka Talyaaniga iyo Sweden ayaa isku farasaaray gegada Stadium Municipal cayaar ay u soo daawasho tageen 30,000 oo taageere dhexdhexaadiyana uu ka ahaa garsoore Viktor Kassai oo u dhashay dalka Hungary.
Cayaarta ka dhacday magaaladda Toulouse waxay qeybtii hore kusoo idlaatay barbaro goolal la’aan ah walow fursado ay labada dhinac soo mareen.
Zlatan Ibrahimovic oo horaan lix gool ugu dhaliyay qaranka Sweden 12 kulan uu metelay ayaa awoodi waayay saameyn muuqata inuu kulan cayaareedkaan ku yeesho.
In cayaartiisii labaad ee tartanka aanu gool dhalin awgeed Zlatan ayaa ku qasban inuu weli sugo ahaanshiyaha xiddiga keliya ee afar tartan oo Euro ah goolal ka dhaliyay, Cristiano Ronaldo ayaase kaga hormari kara iminka.
Eder ayaase goolka dhibcaha u sahlay xulka Talyaaniga dhaliyay daqiiqaddii 88aad ee kulanka.
Italy ayayna wax weyn u tahay in labadii kulan ee tartanka ay ka cayaartay ay guuleysatay iyadoo aan gool laga dhalin, waxayna iminka u soo baxday wareega xiga ee tartanka iyadoo lix dhibcood ku hogaamineysa Group E.
Previous: Dhageyso: Beegsiga roobka iyo dhibaatooyinka u dheer barakacayaasha Badbaado + Sawirro
Next: Darawal baxsad ka ahaa Askarta oo gaarigii uu kaxeynayay la galay waddo dhulka hoos marta